Hiran State - News: Beeraleyda Hiiraan oo isku diyaarinaya sidii ay ugu faaideysan lahaayeen roobabaka ka curtay Hiiraan iyagoo dhib ku qabay isticmaalka matoorka oo aysan dadku badankood awoodin.
Beeraleyda Hiiraan oo isku diyaarinaya sidii ay ugu faaideysan lahaayeen roobabaka ka curtay Hiiraan iyagoo dhib ku qabay isticmaalka matoorka oo aysan dadku badankood awoodin.
HS:-Beeraleyda Hiiraan oo isku diyaarinaya sidii ay ugu faaideysan lahaayeen roobabka ka curtay Hiiraan iyagoo dhib ku qabay isticmaalka matoorka oo aysan dadku badankood awoodin.
Inkasta oo ay guud ahaan dalka Somaliya ka dhacday abaar ay siweyn ugu hoobteen shacabka Somaliyeed kuwooda ku dhaqan koofurta hadane Hiiraan waxey ka mid tahay meelaha aysan dadkoodu helin wax gurmad ah marka laga reebo jaliyada dibada ee ka soo jeeda Hiiraan oo intii karaankood ah dadaalay.
Sidoo kale abaarta saameyn kuma yeelan oo kaliya dadka miyiga laakisne waxaa jira dhibaato u gaar aheyd dadka beeraleyda ah ee iyagu markasta ku tiirsanaa biyaha wabiga Shabele kuwaaasi oo isticmaali jiray matoor. nasiib wanaag markii ay yaraadeen amaba uusan dalka ka da'in wax roob ah waxaa iyaduna adkaatay amaba yaraaday wax soo saarkii oo dadkii badankood wey ku adkaatay iney iibsadaan amaba beerahooda u isticmaalaan matoor maadama qiimaha shidaalka uu aad u kacay dhawrkii bilood ee ugu danbeysay hadane waxaa jira tiro ka mid ah beeraleyda oo had iyo jeer dadaal muujiyay si ay uga faa'ideystaan biyaha wabiga Shabele.
Sidoo kale dadkii beeraleyda ahaa waxaa ku soo qaxay xoolo iyo dad iyaguna miyiga fog kaka yimid haraad si ay ugu soo dhawaadaan biyaha wabiga. hayeeshee waxaa hada ka curtay qeybo badan oo ka tirsan gobolada dhexe oo ay Hiiraan ku jirto roobabkii ay mudo sugayeen intiiba ka hartay amaba ka bad baaday Abaartii kalaafatay nolosha dad iyo duunyo intiiba ilaah ugu talo galay.
Mar aanu xiriir la sameynay qaar ka mid ah beeraleyda Hiiraan ee sida weyn uga faa'ideysta biyaha wabiga iyo matoorkaba waxey sheegeen in markasta ay aad ugu faraxsan yahiin raxmada ilaahey oo ay ula jeedeen roobka waayo matoor waxa uu soo saari karo waa wax aan lala mataal dhigi karin roobka iyagoo rajo weyn ka muujiye iney sanadkan wax soo saarkoodu aad uga sareyn doono sidii sanadkii hore oo ay gabi ahaanba baaqdeen roobabkii.
dhinaca kale dadka ku soo barakacay xerooyinka ku yaala magaalada Belet Weyne iyo agagaarkeeda ayaa laga yaabaa iney dhibaatooyin xaka nolosha ah ka soo gaaran roobabka hada bilaawga ah maadama aysan qaarkood heysan guryo adag oo ay roobka ka galan amaba wax ay u hugiyaan caruurta da yarta ah madama ay markii hore noloshooda caadiga ah la xarbinayeen.
· admin on October 12 2011 02:16:02 · 0 Comments · 2806 Reads ·
14,600,187 unique visits